Badweynta Baasifiga - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Badweynta Baasifik)
Coordinates: 0°N 160°W﻿ / ﻿0°N 160°W﻿ / 0; -160
Kani waa maqaal ku saabsan biyaha badweynta Hindiya ee badaha dhulka. adeegsi kale, eeg Badweynta Baasifiga (faah faahin).
Badweynta Baasifig waa bada ugu weyn badaha dhulka
Badweynta Pacific waa badweynta ugu weyn caalamka marka loo eego kuwa kale. Magaca badweynta Pacific waxaa ubixiyey badmaax Bortuqiis ahaa. Wagaciisa waa Fardinan Magilaan sanadka markuu ahaa 1521 miilaadiga. Sababta uu ugu bixiyey in ay aheyd badweyn (degan). Magaca Pacific waxaa loola jeedaa "degan" run ahaantii waa badweyn degan hirarna aan kubadneyn.
Badweynta Baasifig (ingiriis: Pacific Ocean) waa biyo dhanaan oo aad u baaxad wayn isla markaana qariya 46% oogada biyaha dhulka.
Badweynta Atlantika waxay ku fadhidaa baaxad dhan 165.25 milyan square kilomitir (63.8 milyan square miles), waana bada ugu wayn badwaynta dhulka.
Badweynta Baasifik Waa badwaynta uguwayn badha waawayn.Waxa ay dhererantahay inta u dhaxaysa Cirifka waqooyiwaqooyi ee aduunka ilaa Cirifka koonfureed dhanka galbeed waxa kaxiga labada qaaradood ee asiya iyo Australia dhanka barina waxa kaxiga qaarada maraykanka waxa ay kufadhidaa bed gaadhaya 169.2 milyuun oo iskuwareeg ah waxa ay qaadanaysaa 46% marka badaha oo dhan laysku daro hadii la eego aduunk baasafiku waxa uu ka noqonayaa 30% taas oo kadhigan sadex moolood oo meel waxa la ogaady qarnigii 16aad , waxa ogaaday dhul baadhihii lagu magacaabi jiray Vasco Núñez de Balboa
1 Aragti guud
Badweynta Baasifikgu marka aduunka lagadhigo sadex meelood waxa ay katahay meel taas oo macneheedu yahay in baasafigu uu aduunka kayahay %30. waxa uu ka koobanyahay 15500 milyuun oo kiilo mitor oo iskuwareeg ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Badweynta_Baasifiga&oldid=222317"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Oktoobar 2021, marka ee eheed 11:19.